Xen 4.16 Inosvika Nekunatsiridza Kwekutsigira kweARM, Yekutanga Port yeRISC-V uye Zvimwe | Linux Addicts
Xen 4.16 inosvika nerutsigiro rwekuvandudzwa kweARM, chiteshi chekutanga cheRISC-V nezvimwe.
Mushure memwedzi misere yebudiriro, yemahara Xen 4.16 hypervisor yakaburitswa, vhezheni umo makambani akadai seAmazon, Arm, Bitdefender, Citrix uye EPAM Systems akabatsira mukuvandudzwa kweiyo vhezheni.
Izvi zvinogonesa Xen kuzadzikisa kuita kwepamusoro-kuita. pasina yakakosha Hardware rutsigiro. Intel yaita mipiro yakati wandei kuXen iyo yawedzera rutsigiro kune yayo VT-X Vanderpool ekuwedzera ekuwedzera.
Iyi tekinoroji inobvumidza isina kugadziridzwa masisitimu anoshanda kuti aite seanogadzira mukati memachina chaiwo Xen, chero bedzi sevha yepanyama inotsigira iyo Intel VT kana AMD Pacifica yekuwedzera.
Xen 4.16 Zvitsva Zvitsva Zvitsva
Muiyi vhezheni nyowani ye hypervisor inoratidzwa kuti in TPMManager, iyo inopa chaiwo machipisi ekuchengeta cryptographic makiyi (vTPM), anoitwa pahwaro hweyakajairika TPM yemuviri (Trusted Platform Module), Yakagadzirwa kuti iwedzere kutsigira iyo TPM 2.0 yakatarwa.
Uyewo se yakawedzera kuvimba kukuru paPV Shim layer inoshandiswa kumhanyisa isina kumodified paravirtualized guest (PV) masisitimu muPVH neHVM nharaunda. Mune ramangwana, kushandiswa kwe32-bit paravirtualized vaenzi masisitimu kunogoneka chete muPV Shim modhi., iyo inoderedza huwandu hwenzvimbo mu hypervisor uko kunogona kuve nekusagadzikana.
Izvo zvakare zvakasimbiswa izvo zvidimbu zvisakara zvakacheneswa, yakamira kuunganidza "qemu-xen-traditional" uye PV-Grub kodhi nekukasira (kudiwa kwemaforogo eXen-chaicho kwakanyangarika mushure mekuchinja kweXen-kunoenderana kwakatakurwa kuenda kuQEMU neGrub huru).
Kune rumwe rutivi, tinogona kuwana iyo yakagadziridzwa rutsigiro kune isiri-dom0 modhi, izvo zvinokutendera kuti upfuure kuitwa kweiyo dom0 nharaunda nekutanga chaiwo mashini panguva yekutanga server yekutanga. Shanduko dzakaitwa dzinobvumira kuitwa kwerutsigiro rwe64-bit ARM masisitimu ane EFI firmware.
The rutsigiro rweARM masisitimu 64-bit heterogeneous systems based on the big.LITTLE architecture, kubatanidza macores ane simba, asi anopedza simba uye asinganyanyi kushanda zvakanaka, asi mamwe macores anoshandisa simba pane imwe chip.
Kunze kwezvo, futi chiteshi cheRISC-V chinomira pachena, iyo panguva iyi yekuburitsa, basa rakakosha rakaitwa mukati kuti dom0 itange paRISC-V Hardware, ichitarisa kuunza mashandiro ekubvumidza kukanganisa manejimendi, pamwe nemamwe mainterface anodiwa kune yekutanga boot kodhi.
Yakawedzera kugona kubhutsu paIntel zvishandiso pasina Programmable Interval Timer (PIT).
Kune vashanyi veARM, rutsigiro rwekutanga rwe virtualized performance monitor counters rwakaitwa.
Kuwedzera kutsigirwa kwehardware nekubvumira Xen kuti itange paIntel zvishandiso zvisina programmable interval timer.
Kucheneswa kwezvinhu zvenhaka paunomira kuunganidza QEMU Yechinyakare kana PV-Grub nekusarudzika. Ziva kuti mapurojekiti ese ari maviri akabatanidza Xen kumusoro kwerutsigiro izvozvi, saka kushandisa Xen-chaiwo maforogo hazvichakurudzirwe.
Yekutanga rutsigiro rwemuenzi virtualized performance monitor counters paArm.
Rutsigiro rwakavandudzwa rweanosiyana 64-bit Arm masisitimu nekudzikamisa mabasa eCPU kune ese kuti avandudze tsigiro huru.LITTLE.
Finalmente Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza ruzivo mune inotevera chinongedzo. Kuburitswa kwekuvandudzwa kwebazi reXen 4.16 kuchagara kusvika Chikumi 2, 2023 uye kuburitswa kwezvigadziriso zvekusagadzikana kusvika Zvita 2, 2024.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Xen 4.16 inosvika nerutsigiro rwekuvandudzwa kweARM, chiteshi chekutanga cheRISC-V nezvimwe.
Vivaldi 5.0 inosvika nesarudzo nyowani dzekugadzirisa, mapaneru uye kuvandudzwa kweshanduro
Saizi haina basa. Zviri pamusoro pezvinangwa uye chido chekuzvizadzisa